Magnets Yesigcilikisha - China Ningbo Sine
Yesigcilikisha Magnets Permanent Magnet + Yesigcilikisha Tape (LoMhlangano Magnetic) Ningbo Sine Magnetic Company Limited silwenza round, disc, unxande & nezinye ngezifiso ezimise neodymium uzibuthe kanye uzibuthe nezimo nge izinga okusezingeni 3M self itheyiphu -adhesive eqinile, noma elivamile kabili emaceleni ingcina tape. izinto Permanent enozibuthe ezwakala kangcono lunikezwe nge opholile ingcina: NdFeB uzibuthe N35-N54 emabanga kanye uzibuthe nezimo. Evamile, amateyipu ingcina zisetshenziswa N isigxobo noma S po ...
Magnet Permanent + Yesigcilikisha Tape (LoMhlangano Magnetic)
Ningbo Sine Magnetic Company Limited silwenza round, disc, unxande & nezinye ngezifiso ezimise neodymium uzibuthe kanye uzibuthe nezimo nge izinga okusezingeni 3M self itheyiphu -adhesive eqinile, noma elivamile kabili emaceleni ingcina tape.
izinto Permanent enozibuthe ezwakala kangcono lunikezwe nge opholile ingcina: NdFeB uzibuthe N35-N54 emabanga kanye uzibuthe nezimo. Evamile, amateyipu ingcina zisetshenziswa N isigxobo noma S isigxobo of Nickel / Zn / Rubber kuhlinzwa neodymium yensimbi boron odonsa noma odonsa un-kuhlinzwa nezimo. Plating kungenziwa eshiwo ikhasimende.
amateyipu Yesigcilikisha: China Rare Earth Magnet Limited onika 3M self ingcina opholile kanye ezivamile kabili emaceleni ingcina tape ukujiya: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm kanye nokunye. Amakhasimende bangakhetha ethize 3M imodeli tape noma ukujiya ngokuvumelana langempela izimfuno isicelo. I mkhulu lo ngethephu enamathelayo kuyinto, namandla adhesiveness sayo kuyoba.
Okwamanje, ngokuvamile ezisetshenziswa opholile ingcina zihlanganisa 3M467, 3M9495LE futhi 3M4945.
Isicelo: Yesigcilikisha uzibuthe nezimo libhekene ababuthakathaka amandla kazibuthe amakhulu kanye ukuma nezimo futhi magnetization orientation. Ngakho-ke, abantu abaningi elisetshenziswa inzwa, insimbi kanye imitha, ukukhangisa, umhlobiso, amathoyizi, emakhadini ibhizinisi, incwadi yocingo, futhi ingafakwa okwengeziwe isicelo ukuthungela yezimoto, abaphezulu ehhotela umnyango yokuvala, Equipments wezokwelapha kanye nokunakekelwa kwempilo.
Kepha ingcina neodymium uzibuthe unomphela , zibonisa uzibuthe onamandla kakhulu futhi ukubukeka yobuhle. Kuvamise lisetshenziswe ukushintsha, electronics, noma i-hardware yendlu umhlobiso, ukwelashwa magneto, izinzwa ubuncane noma enkulu ekhaya noma izinhlelo zokuphepha ehhovisi nokunye.
Nge isimiso quality, credit, intengo ezivuna futhi ukulethwa ngokushesha, thina ngokufudumele amakhasimende amasha namadala ukwenza imibuzo.
Previous: Magnetic Igama Tags
Olandelayo: Magnetic Coupling